वर्षायाममा के खाने के नखाने ? यसरी जोगिनुहोस् अनेक रोग र महामारीवाट - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: १९ असार २०७५, मंगलवार
काठमाडौं । मनसुन सुरु भइसकेको छ । स्वास्थ्य यसको अर्को जोखिमपूर्ण पाटो हो । हरेक वर्षायाममा अनेक रोग र महामारी फैलिएको सुन्नमा आउँछ । अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्नुका साथै मृत्यु हुनेको संख्या पनि त्यतिकै बढेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन् ।
वर्षायाममा जताततै पानी नै पानी हुन्छ, किटाणुको प्रश्रय स्थल । जसले डेंगु, मलेरिया, आँखा पाक्ने रोग, टाइफाइड, भाइरल ज्वरो, निमोनिया, हैजा र पखालालगायत रोग निम्त्याउँछ । खानेपानी प्रदूषित हुन्छ । र, पानी स्वस्थ नभए आधा भन्दा बढी रोग लाग्ने गर्छन् । वर्षायाममा हुने उच्च आर्द्रताले शरीरको रोगसँग लड्ने र पाचन क्षमता स्वात्तै घटाउने गर्छ । शरीर सत प्रतिशत तन्दरुस्त हुँदैन । त्यसैले रोगले सजिलै डेरा जमाउँछन् । त्यसैले खानपिन र जीवनशैलीमा थप ध्यान दिनुपर्छ ।
वर्षायाममा के नखाने ?
बासी तथा मसलेदार खाना यो मौसममा नखानुहोस् । वर्षा मौसममा मानिसको पाचन प्रक्रिया सुस्त हुन्छ । खाना पच्न लामो समय लाग्छ । बासी र मसलेदार खानाले पेटमा खराबी गर्छ । यो समयमा काँचो खानेकुरामा विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया हुनसक्छ । यस्ता खानामा हुने रोगको संक्रमणले मानिसलाई चाँडै रोग सार्छ । हुन त सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो ।
तर, पात हुने सब्जीमा पानी परेलगत्तै धुलो, माटो र किटाणु सहज रूपमा बस्न सक्छन् । यसकारण वर्षायामको सागसब्जी राम्ररी धुने र पकाएर खानुपर्छ । सडक किनारमा बेच्न राखिएका फलफूल या खानेकुरा खानु हुँदैन । यस्ता खानेकुरामा धुवाँ–धुलो टाँसिने र शरीरलाई खराब गर्ने गर्छ ।
यो गर्मी मौसम पनि भएको हुँदा घरमा फलफूल काटेर राख्ने तथा खाने गर्नु हुँदैन । माछाको सौखिन हुनुहुन्छ भने यो मौसममा ख्याल गर्नुहोस् । वर्षायाम माछाको प्रजनन समय हो । यो वेला माछा नखाँदा राम्रो हुन्छ । खानु नै छ भने राम्रोसँग सफा गरेर र पकाएर खानुपर्छ ।
वर्षा याममा रोगबाट बच्न र आफ्ना परिवारलाई बचाउन यी कुरा अपनाउनुस् ।
१) आँप, स्याउ, अनार, अम्बा, नासपाती पोषणका भण्डार हुन् । तर, पखालेर मात्र खाने गर्नुपर्छ । आँप धेरै खाँदा पखाला, मासी पर्ने हुँदा विचार गर्नुपर्छ । अंगुरबाट टाढै रहेको राम्रो । अंगुरको बाहिरी भाग पाचन गर्न शरीरले गाह्रो मान्ने गर्छ । खरबुजा पनि वर्षायाममा खासै राम्रो मानिँदैन ।
२) तरकारीले भोजनको महत्वपूर्ण भाग समेट्ने गर्छ । शरीरलाई चाहिने पोषण पूरा गर्ने काममा तरकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सधैभर धेरै तरकारी खान पर्छ भनेर सिकाइने गरिन्छ, तर वर्षायाममा ध्यान नपुराइ खाँदा उल्टो हानी गर्न सक्छ । प्रायः सबै तरकारी खाँदा राम्रो हुन्छ, तर काउली, भिन्डी र केराउजस्ता तरकारी चाहीँ कम खानुपर्छ । टमाटरको पनि कम खानु राम्रो भएको चिकित्सक बताउँछन् । वर्षायाममा सकेसम्म कम मसालेदार खाना स्वास्थ्यवद्र्धक मानिन्छ ।
बढी मसला खाँदा शरीरको तापक्रम र रक्तसंचार दुवै बढ्ने हुँदा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । बढी नुनिलो खाँदा शरीरको पानी सुक्ने हुँदा नुन घटाउने । तरकारी एकदम राम्रोसँग पखाल्ने, धेरै नपकाउने र पाकेको केही समयमै खाँदा बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ । तरकारी किन्दा पनि सकेसम्म ताजा किन्नुपर्छ ।
३) मासु पाचन गर्न शरीरलाई अलि धेरै समय लाग्ने भएकोले वर्षायाममा मासुको खपत पनि कम गर्नु पर्छ । शरीरको पाचन क्षमता स्वाट्टै घटेको बेला शरीरलाई थप भार नदिन माछा मासुको कम गर्नुपर्छ ।
४) हल्का तेल जस्तै भटमासको तेल, सूर्यमुखीको तेल प्रयोग गर्नुपर्छ । तोरीको तेल फाइदाजनक भए पनि यो सिजनमा संक्रमण भित्र्याउने प्रमुख कारकमा पर्छ ।
५) वर्षायाममा हर्बल चिया सकेसम्म धेरै पिउनु पर्छ । यसमा एन्टी ब्याकेटेरयिल गुण धेरै हुने गर्छ । अदुवा, मरिच, पुदिना, मह जस्ता चिज प्राकृतिक एन्टी बायोटिक हुन् । यस्ता चिज चियामा मात्र हैन, तरकारी, अचारमा धेरै भन्दा धेरै मिसाए शरीर संक्रमणको खतराबाट बच्न सक्छ ।
६) वर्षायाममा सफा पानी एकदम धेरै पिउनुपर्छ । उमालेको या त राम्रोसँग फिल्टर गरेको पानीबाहेक अरु पानी पिउनु हुँदैन । बाहिर हिँड्दा पनि झोलामा आफैँ पानी बोक्ने बानी गर्नुपर्छ ।
७) सकेसम्म बाटामा राखेका खानेकुरा जस्तै चटपटे, पानीपुरी, समोसा, पकोडा, मम खानुहुँदैन । मनसुनमा जहाँतही किटाणु हुने भएकोले बजारिया खानेकुरा कम गर्नुपर्छ ।
८) व्यायाम गरेर पसिना एकदम निकाल्नुपर्छ । अल्छी गरेर नबस्ने । जति स्फुर्त भयो शरीर त्यतिकै तन्दुरुस्त र स्वस्थ हुनेछ ।
बिर्सेर पनि नखानुहोस् वर्षायाममा माछा,यस्ता छन् कारण
धेरैलाई माछा निकै मिठो लाग्छ तर यदि तपाईंलाई वर्षायाममा माछा खान मन लागेको छ भने एकपटक सोच्नुहोस् किनभने यसको सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ । माछामा अत्यधिक मात्रामा ओमेगा–थ्री फ्याटी एसिड हुन्छ । तर पनि वर्षायाममा यसको सेवन निकै हानिकारक हुनसक्छ । यस कारण वर्षायाममा माछा खान हुँदैन :-
बजारमा ताजा माछा पाइँदैनन्ः
वर्षायाममा पानीको स्तरमा अत्यधिक वृद्धि हुने भएकाले माछा मारिँदैन । जसकारण बजारमा ताजा माछा पाउन मुश्किल हुन्छ । धेरैजसो प्याक गरिएको र स्टोर गरिएका माछा मात्र पाइन्छन् । १० दिनभन्दा बढि स्टोर गरिएको माछा खराब हुनसक्छ जसको सेवनले गर्दा संक्रमणको खतरा बढ्ने गर्छ ।
माछाको प्रजननको मौसमः
वर्षायाम माछा र अन्य समुन्द्री जीवका लागि प्रजननको मौसम हो तसर्थ अण्डा भएको माछा खाँदा पेटमा संक्रमण र फूड पोइजनिङको खतरा बढ्ने गर्छ ।
ब्याक्टेरिया र यिस्टबाट माछालाई बचाउनका लागि सल्फाटेस र पोलिफोस्पाटेसजस्ता प्रिजर्भेटिभको प्रयोग गरिन्छ । यस्ता माछा खाँदा तपाईंलाई सास फेर्न समस्या हुनुका साथै हृदयरोग लाग्ने गर्छ ।
पानी प्रदुषणको सम्भावना हुने भएकोले वर्षायाममा माछामाथि फोहोर जम्मा हुन्छ जुन सफा पानीले धुँदासमेत जाँदैन । फोहोर माछा खाँदा टाइफाइड, जन्डिस र झाडापखालाजस्ता रोग लाग्नसक्छ ।
सकारात्मक सोच र तनाव व्यवस्थापन सीड्नीमा शिविर (फोटोफिचर)
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको ग्रानभिल स्थित नेपाली समुदायमा रचनात्मक जीवन, सकारात्मक सोच र तनाव व्यवस्थापन […]
कति थियो स्थानीय तहका पदाधिकारीका मासिक पारिश्रमिक ?
सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहका पदाधिकारले लिइरहेको तलब गैरसंवैधानिक ठहर
वाम गठबन्धनको आडमा चुनाव जित्ने पन्तको धम्की,अबदेखि नेपालमा निर्वाचन नगर्ने !